Fankalazana ny faha-15 taonan'ny TIM: Omeko tsy omeko, hoy ny Fanjakana HVM
lundi, 03 juillet 2017 21:29
Zoma 30 jona 2017, namoaka taratasy manome alalana ny Tiako i Madagasikara hankalaza ny faha-15 taonany eo amin'ny kianjabe Mahamasina ny prefen'Antananarivo ary nanipika fa iantohan'ny mpikarakara ny filaminana sy fandriampahalemana.
Efatra andro aty aoriana, nofoanan'ny Prefen'Antananarivo ny fanomezan-dalana nomeny noho ny antony fandriampahalemana araka ny loharanom-baovao eo ampelan-tanany, izay mijanona ho tsiambaratelony.
Loharanom-baovao hafa indray no manazava fa fotoam-pivavahana no nangatahana fahazoan-dalana dia nomena, nefa niova ho hetsika politika sy fampisehoana rindrankira indray ka izay no nitarika izao fanafoanana ilay fahazoan-dalana nomena ny TIM izao.
Milaza ny tsy hihemotra manoloana izany anefa ny TIM fa hanatanteraka ny hetsika efa nomanina eo Mahamasina, araka ny fanazavan'ny filohan'ny Vondrona parlemantera TIM eo anivon'ny Antenimieram-pirenena, Randriamandimbisoa Félix.
Hafanafana indray izany ny faran'ny herin'andro raha hirotsaka antsehatra vao maraina ny Emmoreg hanakana ny fidirana ao Mahamasina.
mercredi, 13 décembre 2017 00:01
mardi, 12 décembre 2017 23:51
mardi, 12 décembre 2017 19:14
mardi, 12 décembre 2017 13:41
mardi, 12 décembre 2017 05:03
mardi, 12 décembre 2017 00:54
lundi, 11 décembre 2017 23:29
lundi, 11 décembre 2017 06:22
dimanche, 10 décembre 2017 17:50
dimanche, 10 décembre 2017 16:16